ရန်ပိုင်| January 4, 2013 | Hits:8,492
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment sa3January 4, 2013 - 2:26 pm	Hep C is Hep C ,not back bone cancer .be fair news.naw ok yes?Kaung Yar Thu Ga Ti Lar Par Say Byar.Rest in peace brother.
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ရိုးဂုဏ်နှင့် တပ်မတော်သားများ လိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ် ၁၀
လိပ်ကျွန်း လူသတ်မှုကြောင့် စွပ်စွဲဖမ်းဆီး ခံထားရသူတဦး၏ ဖခင်ကွယ်လွန်